Akụ mmiri Sourcing - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Mgbe ọtụtụ afọ nke ịrụsi ọrụ ike, PCBfuture amalitela mmekọrịta mmekọrịta siri ike na ndị na-ekesa ihe ndị kachasị ewu ewu n'ụwa, nke mere ka anyị nwee ike inweta ihe ndị dị elu site na ndị na-ebubata ngwaahịa na ndị nrụpụta ikike. Ugbu a, PCBfuture nwere 18 ọkachamara ị nweta injinia na anyị mepụtara nke ọma-haziri ahazi na kasị ezi sourcing ụzọ maka electronic components. Ọrụ anyị niile na-enyere anyị aka ibelata ngwa ahịa na-enweta akụkụ mbụ yana ọnụ ahịa akụ na ụba. E wezụga na, anyị PCB Assembly BOM e kwuru ụzọ oge nwere ike ịbụ dị ka ngwa ngwa dị ka awa 24.
Akwa Eletrọniki Akụrụngwa
PCBfuture mgbe niile mara ịdị mma bụ isi ihe maka ndị ahịa, yana akụrụngwa bụ isi ihe kpatara bọọdụ eletrọniki nwere ike ịrụ ọrụ ogologo ma ọ bụ. Kemgbe nke ahụ, anyị na-ewulite mmekọrịta siri ike na ndị nyere ikike na ndị ama ama na-ebubata ngwaahịa, gụnyere Arrow Electronics, Mouser, Avnet, Digi-key, Farnell, Future Electronics, wdg. anyị nkwakọba.
Prototype na Obere-to-Mid Components Sourcing
Anyị niile maara na electronic components Soccer bụ akụkụ bụ isi na turnkey PCB nzukọ ọrụ na ọ dịkwa mkpa a nnukwu igbapu nke ume, ego na oge maka ya. Tụnyere Volume pbb nzukọ, na Prototype pbb nzukọ ga-uneconomical maka injinia na-emepụta. PCBfuture kere usoro ị nweta ihe nke ọma na-eme ka anyị nwee ike nweta ma kwupụta akụkụ ndị achọrọ ngwa ngwa. Na-adabere na mmekọrịta chiri anya nke otu ahụ, anyị nwere ike ịkọ ngwa ngwa BOM, n'agbanyeghị agbanyeghị ntụpọ ma ọ bụ iwu olu. O nwekwara ike inyere anyị aka ịchọta ihe ndị siri ike ịnweta.
Kwa afọ, PCBfuture azụta ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị sitere na ndị na-ekesa nke ọma na ndị nrụpụta mmiri. Otutu ego zuo mere ka anyi nweta ego di obere site na ha. Nke a na-enyere anyị aka belata ọnụ ahịa anyị nke nyegoro anyị aka ịfefe uru ndị ahịa anyị. Anyị dum akporo turnkey PCB nzukọ iwu na-ebenata mkpa maka mmezi yiri nkata nchekwa maka electronic components anyị.
Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịme PCB Manufacturing, Comprehensive Sourcing and Electronic Assembly dị ka ọrụ anyị, ma mee ka ndị ahịa anyị lekwasị anya na injinia eletrọniki na imewe.
Iji nweta atụmatụ PCB Assembly ego maka ọdịnihu, biko zigara arịrịọ gị ọrụ @ pcbfuture.Ch.